စားသောကျဆိုငျသတငျးအခကျြအလကျ | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » စားသောကျဆိုငျသတငျးအခကျြအလကျ
Updated: 2016-10-03 13:43
Itoshima ရေလုပ်ငန်းဒေသ ဆောင်းရာသီ ရာသီပေါ် ဆိုင်တန်းလေးတွေ ဖြစ်တဲ့ ( ဂုံးကမာ အရောင်းဆိုင် တန်း ) ။ နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာ လကနေ မတ် လ အတွင်း တွင် ကျင်း ပလေ့ ရှိပြီး ၊...
Updated: 2016-09-13 16:43
ဖုခုအိုကမြို့ တဲန်းဂျင်းက လမ်းပေါ်ကစားသောက်ဆိုင်
ဖုခုအိုက မြို့ လို့ ဆို လိုက် တာ နဲ့ လမ်းပေါ် ကစားသောက်ဆိုင် လေး တွေ နဲ့ အတူ တွဲ မြင်မိမှာ သေချာပါတယ်။ အဲ့ လို လမ်းဘေးစားသောက်ဆိုင်လေးတွေထဲကမှ ယခုတစ်ခါ ရော်စခု ဆို တဲ့ တဲန်းဂျင်း ဧရိယာမှာ ရှိတဲ့ ဆိုင်...
Updated: 2016-09-12 13:21
စိုင်းကတဲအိ ရော်ဘိကို ( ကင်းမွန်ငါး အထူး စားသောက်ဆိုင်)
နာကစွတ် မြို့ ရော်ဘိကို လို့ခေါ်တဲ့ နေရာမှာ ရှိတဲ့ ( ရေပေါ်စားသောက်ဆိုင်ကလေး) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရော်ဘိကိုး နဲ့ ခါဘဲရှိမား ကျွန်း ကို ဆက် သွယ်ထား တဲ့ ( ရော်ဘိကိုး တံတားကြီး ) ကို ဖြတ်လျှောက်လာလိုက်ရ...
Updated: 2016-08-31 10:33
လတ်ဆက် တဲ့ ငါးတိုနဲ့ ပြု လုပ် ထား တဲ့ အကောင်း စား ချန်း ကိုး နာဘဲ ဟော့ပေါ့ စားသောက်ဆိုင်။ချန်း ကိုး နာဘဲ ဟော့ပေါ့ ပါဝင် တဲ့ ကို့စ်ဟင်းလျာ များ အပြင်အခြား ဟင်းလျာ များ လဲ အများ အပြား မှာ ယူ သ...
Updated: 2016-08-30 16:58
Tensenkyo nagashi soumen ဂျပန် ခေါက် ဆွဲ
Rotate Flow စနစ် နဲ့ စိုးမဲန်း ခေါက် ဆွဲ ဖြစ်ပြီး မီတာ အနည်း ငယ် အပေါ် မှာ ရှိ တဲ့ ရေတိုင် ကီ ကနေ ပိုက် တုတ်ကြီး ထဲ ကနေ စီးဆင်းလာ တဲ့ စိုးမဲန်းခေါက် ဆွဲ က ပိုက်ကျဉ်းသွား တဲ့ နေရာ မှာလာစု ပါတယ်။ ရေထွ...
Updated: 2016-07-11 16:57
Eggs'n Things အချိုပွဲ တဲန်းဂျင်း ဆိုင်ခွဲ
photo by flickr ဟာဝိုင်အီ မှာ ပင် ရင်း ဆိုင်က တည်ရှိ ပြီး ၊ ဟာဝိုင်အီ ရဲ့ မနက် စာ တိုင်း ရဲ့ ကိုယ်စား ပြု ဆိုင် 「Eggs'n Things」ကို ဖုခုအိုက ၊တဲန်းဂျင်းမှာ ဖွင့် လှစ် လိုက် ပါတယ်။ အမေရ...